Covid-19 SHB Hub
HOMEBLOG PostsCATEGORIESSHB MAIN SITECovid-19 screeningCONTACT
About SHB Covid Hub.
The Somali Health Board has set up a Covid-19 content hub to create culturally responsive awareness that is aimed towards the Somali community in King County.
Qaybinta Laptopka loogu talagalay Ardayda Dugsiyada Dadweynaha Seattle
Laga bilaabo ardayda waayeelka dugsiga sare, Dugsiyada Dadweynaha Seattle waxay bilaabayaan u qaybinta ardayda kumbuyuutarro kumbuyuutar loogu talagalay ardayda usbuuca Abriil 6. Sababta oo ah waqtiga loo aasaasayo kombiyuutar kasta oo loo adeegsado ardayda, iyo tirada kooban ee aaladaha laga helo markab kasta, dib u soo celinta aaladaha qaadataa dhowr toddobaad.
Ardayda dugsiga sare iyo dugsiga dhexe, aaladaha laga soo qaatay iskuulada waa hantida Dugsiyada Dadweynaha Seattle (SPS) waana loo fiirin doonaa ardayga inta ay is diiwaangelinayaan degmada. Waayeelka sanadkaan, tilmaamaha soo celinta waxaa lala wadaagi doonaa guga.
Ardayda dugsiga hoose (xanaanada - fasalka 5aad)
Macallimiinta iyo shaqaalaha dugsiga waxay la xiriiri doonaan qoysaska si ay u ogaadaan baahida. Kumbuyuutarrada hibada leh ee Amazon waxaa loogu talagalay ardayda aan marin kombuyuutar kale ku haysan gurigooda oo midkiiba guri ayaa la siin doonaa.
Laptopka ayaa noqon doona aaladda ardayga, barnaamijyada kale iyo barnaamijyada waa la soo dejisan karaa. Taageerada farsamada ee Dugsiyada Dadweynaha Seattle lama siin doono aaladan.
Amazon ayaa si toos ah kombuyuutarrada gacanta ugu gayn doonta guryaha ardayda qiyaas ahaan usbuuca Abriil 20. Kumbuyuutarradu waxaa ku jiri doona xafiiska Microsoft ee ardayda, kaas oo ardaydu u isticmaali doonaan magacyadooda isticmaalaha SPS. Aaladda ayaa sidoo kale loo sameyn doonaa si ay u galaan internetka. Ka aqri wax badan oo ku saabsan ku- deeqidda laptop laptop ee Amazon.
Fadlan ka hubso ardaygaaga macalinkiisa ama maamulaha iskuulkaaga haddii aad wax su'aalo ah ka qabtid ku caawinta cunuggaaga inuu helo kombuyuutar.
Ardayda Dugsiga Dhexe (fasalada 6aad - 8aad)
Kadib dhammaystirka qaybinta ardayda dugsiga sare ee ugu dheer cadaalada waxbarashada ee aan haysan aalad kale oo la heli karo , ardayda dhigata fasalada 6-8 waxay bilaabi doonaan helitaanka kumbuyuutarro kombuyuutar ah, oo loo qorsheeyay wareejitaan wejigiisu jaban yahay.
Ardayda Dugsiga Sare (fasalada 9aad - 12aad)
Laga bilaabo waayeelka, qaybinta dugsiga sare ee laptopsyada ayaa bilaaban doona usbuuca Abril 6.
La-taliyayaashu waxay wacyigelin u sameynayeen qoysaska si ay u ogaadaan baahida. Waayeellada dugsiga sare ee ka dambeeya helitaanka buundada oo aan guryo kombuyuutar kale ku haysan gurigooda ayaa marka hore heli doona laptops.
Waayeellada kadib, wajiga labaad ee laptopsyada ayaa loo qeybin doonaa ardayda kale. Ahmiyada ugu horeysa ee qaybinta ayaa noqon doonta ardayda dugsiga sare oo ka fog cadaaladda waxbarashada iyadoon laga helin kombiyuutar kale gurigooda. Ka dib qeybinta ardayda dugsiga dhexe oo laga dheehan karo cadaalada waxbarashada iyadoon laga helin kombiyuutar kale gurigooda, dhamaan ardayda kale ee fasalada 9-11 waxaa la siin doonaa laptop.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan qorshaha istiraatiijiyadeed ee degmada, Seattle Excellence , kaas oo ay ku hagayaan afar ahmiyadaha ugu sarreeya iyo xoogga laser siinayo taageeridda ardayda midabka leh ee ka fog caddaaladda waxbarashada, laga bilaabo wiilasha Afrikaanka Mareykanka ah iyo ragga dhallinyarada ah.
Qaybintaani waxay dhammeyn doontaa barnaamijkii laptop-ka ahaa ee hal-ilaa-hal ah (1: 1). Ka akhriso inbadan oo ku saabsan barnaamijka laptop 1: 1 ee ardayda.
Qoysasku waxay degmada ka heli doonaan email, wicitaan taleefan, iyo farriin qoraal ah degmada ogeysiinaysa jadwalka qaybinta.
Ku Saabsan Nidaamka Qaybinta
Ardayda waxay heli doonaan laptop, charger, iyo baakado macluumaad si ay u isticmaalaan kumbuyuutarka.
Ardayda uusan wehelin waalidku waa inay keenaan aqoonsi (sida kaarka ASB ama laysanka darawalka). Ardayda ayaa la weydiin doonaa inay buuxiyaan foomka heshiiska isticmaala.
Iyadoo la raacayo tilmaamaha jiidashada jirka iyo habdhaqanka ugu wanaagsan ee nadaafadda, shaqaaluhu waxay u qaybin doonaan kumbuyuutarro kumbuyuutarro loogu talagalay ardayda iyo qoysaska gaari wadista ama kor u soo gaari kara si ay u helaan aag goos goos ah dhowr iskuul oo degmada ku yaal.
Qaybinta laptop-ka ayaa laga bilaabi doonaa Dugsiga Sare ee Ingraham (North Seattle) iyo Dugsiga Dhexe ee Washington (Degmada Dhexe). Labadan iskuul waxaa loo xushay sababta oo ah dhismaha iskuulka ee iskuulka wuxuu qaadi karaa wadida qeybinta mana ahan goobo hada cuntada lagu qaybiyo. Bogagga waa la cusbooneysiin karaa markii loo baahdo.
Intaa waxaa sii dheer, Isbahaysiga Waxbarshada iyo Dugsiyada Dadweynaha Seattle waxay dhawaan abuureen Sanduuqa Sinaanta Waxbarshada si loo hubiyo in ardaydu sii wadan karaan barashada inta lagu jiro xiisadda COVID-19, gaar ahaan ardayda oo ka fog cadaaladda waxbarashada. Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan sida aad uga caawin karto ardayda inay ka adkaadaan carqaladaha teknolojiyadda oo aad u oggolaato dhammaan ardayda fursad ay ku sii wataan wax ka barashada guriga inta lagu jiro aafadda adduunka adigoo ku tabarucaya Sanduuqa Sinaanta Waxbarashada.
Open Testing Areas
Copyright © Somali Health Board
Powered by SHB | Made with ❤️ in Seattle